Updated News in Nepali from all over the world at : http://nepali.reaknlinks.com. सेनाका भगौडा र बिप्लवका लडाकुको लुटेरा समूह, प्रहरीकै हतियार प्रयोग गरी प्रहरी बनेर चलाएको डकैती धन्दा (भिडियो सहित)
सेनाका भगौडा र बिप्लवका लडाकुको लुटेरा समूह, प्रहरीकै हतियार प्रयोग गरी प्रहरी बनेर चलाएको डकैती धन्दा (भिडियो सहित)
जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न जिम्मेवारी पाएको सुरक्षाकर्मी नै लुटपाटमा लागे भने के होला?
के उनीहरूले यस्तो गर्लान्?
धेरैलाई यस्तो लाग्न सक्छ। तर, आफूलाई सुरक्षाकर्मी भएको भन्दै भगौडा पूर्व आर्मी र सशस्त्र प्रहरीका जवान नै लुटपाटमा संलग्न भएको खुलेको छ।
शनिबार काठमाडौंको माछापोखरीबाट हतियारसहित पक्राउ परेका ८ जना मध्ये दुई जना सुरक्षाकर्मी भएको खुलेको हो।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका गोरखा अजिरकोट गाउँपालिका घर भएका ३८ वर्षीय कुशल अधिकारी सेनाका भगौडा हुन्। त्यस्तै गुल्मी इस्मा गाँउपालिका घर भएका ३० वर्षीय युवराज भण्डारी पनि सुरक्षाकर्मी नै हुन। उनी शसस्त्र प्रहरीका जवान हुन्।
लामो समयदेखि काठमाडौं भित्र डकैती धन्दा चलाउँदै आएको समूहले बौद्धमा एक जनाको घर लुट्ने योजना बनाउदै थिए।
गएको भदौ १९ गते बाबुको उपचार गर्न काठमाडौं आएका नवलपरासी वर्दघाटका योगेश बिकलाई सो समूहले नक्कली सुन देखाएर लुटपाट गरेको थियो।
‘सुन चाहिएको छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्,’ नुवाकोट तारकेश्वरका ३० वर्षीय राजन तामाङले तीन महिनाअघि विकलाई भनेका थिए ।
उनीहरुको सामान्य चिनजान मात्र थियो । तर, राजनलाई योगेश सुनचाँदी व्यवसायी हुन् भन्ने चाहिँ थाहा थियो । योगेशको नवलपरासीमै बालकृष्ण सुनचाँदी पसल छ । बीच–बीचमा राजनले योगेशलाई तारन्तर फोन गरिरहन्थे ।
गंगालाल अस्पतालमा उपचाररत बुबालाई भेट्न काठमाडौँ आएको बेला योगेशले राजनलाई पनि भेट्ने योजना बनाउँछन् । राजनले योगेशलाई सामाखुसी बसपार्कस्थित मुस्ताङ गेष्ट हाउसको ४०४ कोठा नम्बरमा बोलाउँछन् ।
योगेशसँग २ वटा झोला हुन्छ । सानो झोलामा सुन किन्न ल्याएको पैसा र ठूलो झोलामा आफ्नो कपडा। राजनले विदेशबाट ल्याएको ५०–५० ग्रामको सुनको ढिक्का आफूसँग रहेको कुरा योगेशलाई जानकारी गराएका समेत थिए ।
योगेश सो होटलको ४०४ नम्बरको कोठामा पुग्छन् । राजन एक्लै हुन्छन् । एकछिन उनीहरुबीच कारोबारको विषयमा कुराकानी हुन्छ । कुराकानीकै क्रममा राजनले साथीहरुले सुन ल्याउँदैछन् भनेर योगेशलाई भुलाउँछन् ।
केहीबेरमा सो कोठामा थप ४ जना युवाहरु पस्छन् । कोठाभित्र पसेलगत्तै उनीहरुले योगेशलाई कन्चटमा पेस्तोल देखाएर ‘हामी प्रहरी हौँ’ भन्दै ठूलो झोला लुटेर त्यहाँबाट भाग्छन् । सानो झोला योगेशसँगै हुन्छ ।
आफू लुटिएको थाहा पाएपछि योगेशले प्रहरीमा उजुरी दिन्छन् ।
सो घटनापछि प्रहरीले लुटिएको स्थान र होटलमा भएको सीसीटिभी फुटेज हेर्यो र त्यही फुटेजकै आधारमा शनिबार प्रहरीले अधिकारी समूहलाई हतियारसहित पक्राउ गरेको हो।
उजुरी दिएको आधारमा प्रहरीले होटलको सीसी क्यामेराका आधारमा गुल्मी ईस्मा गाउँपालिका–५ घर भई हाल हल्चोक बस्ने ३० वर्षीय युवराज भण्डारीलाई पक्राउ गर्‍यो।
भण्डारीलाई पक्रेर सोधपुछ गर्दै जाँदा घटनामा थप ७ जनाको संलग्नता देखिन आएको परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
भण्डारीको बयानको आधारमा खोज्दै जाँदा बाँकी ७ जना बसपार्कस्थित हाई रेष्टुरेन्ट एण्ड बारबाट पक्राउ परेको डीएसपी बोगटीले बताए ।
पक्राउ परेको समूहले काठमाडौंमा हुने गरेका अघिकासं स्थानमा लुटपाट र डकैती गरेको प्रहरी आशंका छ।
‘पक्राउ परेको समुहले उपत्यकामा भएको धरै घटनामा संलग्नता भएको हुनसक्छ हामी अनुसन्धान गर्दैर्छौ’, आईतबार लुटेरालाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरी परिसर टेकुका एसपी अशोक सिंहले भने।
पक्राउ पर्नेहरुमा भण्डारीसँगै गोरखा अजिकोटका ३८ वर्षीय कुशल अधिकारी, नुवाकोट तारकेश्वरका २९ वर्षीय राम बहादुर तामाङ, नुवाकाट विदुरका २५ वर्षीय धर्मराज तामाङ, रसुवा छेदिङमोका २९ वर्षीय योर्साङ घले, धादिङ खनिवासका २७ वर्षीय विजय तामाङ, नुवाकोट विदुरका ३० वर्षीय पिटर तामाङ र नुवाकोट तारकेश्वरका राजन तामाङ रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका सेनाका भगौडा अधिकारीले काठमाडौंको माछापोखरीमा हाई रेष्टुरेण्ड एण्ड बार नामक डान्स बार चलाउँदै आएका छन्।
उनीहरुले सोही डान्सबार मार्फत लुट्ने योजना बनाउने गरेको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी होमेन्द्र बोगटीले बताए।
उनका अनुसार लुटेरा समूहले दिनभरी बारमा बसेर लुट्ने योजना बनाउने, राति भएपछि लुटपाट गर्न निस्कने गरेको थियो।
लुटेरा समूहले सुन ब्यापारीलाई सुन बेच्ने भन्दै नक्कली सुन देखाएर रकम लिएर हतियार देखाएर तर्साउँथे भने घरमा लुटपाट गर्न जाँदा हतियार देखाएर मान्छेलाई तर्साउदै लुटपाट गर्थे।
प्रहरीका अनुसार सेनाका भगौडा अधिकारी यस अघि पनि डकैतीमै पक्राउ परेका थिए।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूराले अधिकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।
बिप्लवका लडाकु डकैती समुहमा
अधिकारीसँगै पक्राउ परेका मुख्य नाइके योर्साङ घले ‘गोरे’ हुन् । गोरे विप्लव समूहका नेता तथा लडाकु हुन्।
राजधानीमा डकैती समूहमा सामेल घलेले आफूले बिप्लव माओबादी छाडेको एक महिना भयो भने पनि उनी अहिलेसम्म बिप्लव पार्टीमै आवद्द भएको प्रहरीको दाबी छ।
यस्तै राम बहादुर तामाङ, धर्मराज तामाङ, विजय तामाङ राजन तामाङ र कुशल अधिकारी हाई रेष्टुरेन्ट एण्ड डान्स बारको सञ्चालक रहेको डीएसपी बोगटीले जानकारी दिए।
कसरी पुग्यो प्रहरीको हतियार ?
पक्राउ परेको लुटेरा समूहबाट बरामद भएको हतियार प्रहरीकै हतियार हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानलाई फराकिलो पारेको छ।
प्रहरीले बोक्ने हतियार बरामद हुनु र हतियारमा भएको सबै नम्बर मेटुनुले प्रहरीकै हतियार भएको हुनसक्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ।
‘हामीले बोक्ने पेस्तोल हुन्, उनीहरुको हातमा कसरी पर्‍यो’, प्रवक्ता बोगटीले भने, ‘केही नदेखिने गरी नम्बर मेटाइएको छ, हतियार कसको हो र कताबाट आएको अनुसन्धानबाट खुल्छ, परिक्षणका लागि ल्याबमा पठाउँछौं’, बोगटीले भने।
काँग्रेस सभापति देउवाद्वारा प्रदर्शनी अवलोकन